आगामी बजेट,के छ सरोकारवालाको अपेक्षा ? – Rajdhani Daily
आगामी बजेट,के छ सरोकारवालाको अपेक्षा ?
सपना देखाउने बजेट आउनुहुँदैन
आगामी बजेटले उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सपना देखाउने खालको बजेट आउनु हुदैन । यसअघिको बजेटले जनतालाई सपना मात्रै देखायो । अब आउने बजेटले भने त्यो सपना साकार गर्नुपर्छ । हालको हाम्रो स्थिति हेर्ने हो भने बैंकमा गयो पैसा पाइँदैन, व्यापार–घाटा पनि व्याप्त नै छ । पहिले त यस्तो स्थितिको समाधान गर्नेे बजेट आउन जरुरी छ । हामीकहाँ अहिले मन्त्रिपिच्छे योजना आउँछन् तर पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिनेमा भने निरासाजनक स्थिति छ । त्यसकारण अब दीर्घकालीन योजनामा मन्त्रीपच्छिे बजेट आउन जरुरी देखिन्छ ।
पहिलो प्राथमिकता धरातलमा रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बजेट आउन जरुरी छ । अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटन देखिन्छ । अहिले जलविद्युत् र पर्यटन नै दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउने आधार देखिन्छन् । त्यसकारण यी कुराहरू आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ ।
करमा स्पष्टता हुनुपर्छ
अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन
पहिलो कुरा त अहिलेको अवस्थामा करको विषय अन्योल छ । कसरी कर लागू हुने भन्ने स्पष्टता नै छैन यसमा स्पष्टता ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । दीर्घकालीन लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्दा करको दरमा कम गरिनुपर्छ । कर छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अब आउने बजेटमार्फत सेयर बजार क्षेत्रगत नियमनकारी निकाय गठन गरिनुपर्छ । भएका नियमनकारी निकायलाई सक्रिय गराउनुपर्छ । हाल हामीकहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय भएसरह जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुहल फन्डलगायतका क्षेत्रहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि आगामी बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरिनुपर्छ । आगामी बजेटमार्फत ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बजेट आउनुपर्छ ।
Tags: आगामी बजेट